देवीको ‘खोंइछ’ भरिँदै,के हो ‘खोंइछ’ भर्ने परम्परा ? – Dcnepal
देवीको ‘खोंइछ’ भरिँदै,के हो ‘खोंइछ’ भर्ने परम्परा ?
प्रकाशित : २०७७ कार्तिक ८ गते २०:५१
महोत्तरी । बडादशैंँ पर्वको महासप्तमीका दिन आँखा खोलिएका देवी प्रतिमामा श्रद्धालु भक्तजन ‘खोंइछ’ (पोल्टा) भर्दैछन् । पूmलपातीको दिन सूर्यास्तसँगै शुरु हुने ‘खोंइछ भर्नेक्रम महानवमीसम्म रहने मैथिल परम्परा छ ।
देवी प्रतिमा सर्वसाधारणको दर्शनका लागि खुला गरिएकै दिन(फूलपातीका दिन) सूर्यास्तपछि खोंइछ भर्नेहरुको निकै भीड लाग्ने गरेको छ । देवी प्रतिमालाई सजाएर लगाइएको सारीको अग्र भागको पोल्टामा खोंइछ भर्नेहरुको सुविधाका लागि पालो निर्धारण गर्न धेरैजसो देवी प्रतिमास्थलमा अग्रिम नाम दर्ता गरिएको छ ।
मिथिला क्षेत्रमा भाकल मान्न देवी प्रतिमाको पोल्टो भर्ने प्रचलन चलेको यस क्षेत्रका संस्कृति परम्पराका ज्ञाताको भनाइ छ । खासगरी दुर्गाभवानीको लक्ष्मीस्वरुप र बिघ्नहरणीको रुप सम्झेर खोंइछ भरिने परम्परा बसेको बर्दिवास–३ का बासिन्दा मैथिल पण्डित महेशकुमार झाले बताए ।
देवीको खोंइछ भर्नाले दरिद्रता, सन्ताप र शारीरिक कष्ट निवारण भई सुख, सन्तोष प्राप्त हुने मैथिल हिन्दू जनविश्वास छ । ‘खोंइछ’ महासप्तमीका दिनदेखि नवमीसम्म श्रद्धालुले भर्ने गरेका छन् । नवरात्रमा देवी उपासना र कर्तव्यसँगै जोडिने गरेको यो विधि महिलाले नै पूरा गर्ने गरेका छन् ।रासस